Orinasa 4 manao hadisoana no manimba ny SEO eo an-toerana | Martech Zone
Orinasa 4 manao hadisoana no manimba ny SEO eo an-toerana
Talata, Aogositra 23, 2016 Zoma, Septambra 14, 2018 Miriam Ellis
Misy ny fanovana lehibe eo amin'ny fikarohana eo an-toerana, ao anatin'izany ny fametrahana Google doka miisa 3 any ambony ka manosika ny fonosana ao an-toerana sy ny fanambarana fa Ny fonosana eo an-toerana dia mety hisy fidirana karama tsy ho ela. Ho fanampin'izany, ny fampisehoana finday tery, ny fiparitahan'ny fampiharana, ary ny fikarohana amin'ny feo dia samy mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fifaninanana hahazoana fahitana, manondro ny ho avy amin'ny fikarohana eo an-toerana izay fitambaran'ny fanamoriana sy ny famirapiratan'ny varotra no tena ilaina. Ary na izany aza, orinasa maro no hajanona amin'ny ambaratonga fototra indrindra amin'ny alàlan'ny tsy fahazoana ifotony ny SEO eo an-toerana.
Ireto misy lesoka 4 fahita mahazatra ataon'ny SEO izay maneho fahalemena lehibe amin'ny sehatry ny marketing mihombo:
1. Fampiharana diso ny laharana fanaraha-maso ny antso
Ny laharan-tariby antso dia fady lava ao amin'ny indostrian'ny varotra fikarohana eo an-toerana noho ny fahafahan'izy ireo mamorona tahirin-kevitra maro tsy mifanaraka amin'ny Internet ary misy fiatraikany ratsy eo amin'ny laharana eo an-toerana. Na izany aza, azo ampiharina am-pitandremana izy ireo mba hanomezana angon-drakitra sarobidy ho an'ny orinasa. Ireto misy torohevitra vitsivitsy hanombohana:
Ireto misy torohevitra vitsivitsy hanombohana:
Ny fomba iray dia ny fandefasana ny nomeraon'ny orinasa ankehitriny ho an'ny mpamatsy mpanara-maso antso hahafahanao manara-maso ireo antso amin'ny isa misy anao. Ity zotra ity dia manamaivana ny filanao manitsy ny lisitry ny orinasanao.
Na, raha efa milahatra tsy mifanaraka amin'ny laoniny ny lisitry ny asa aman-draharahanao ary mila fanadiovana dia mandrosoa maka nomerao fanaraha-maso antso vaovao, miaraka amina kaody eo an-toerana, ary ampiasao ho isa vaovao. Alohan'ny hisafidiananao nomerao dia tadiavo ao amin'ny Internet raha azonao antoka fa mbola tsy misy dian-tongotra lehibe ho an'ny orinasa hafa izay nampiasa ilay isa teo aloha (tsy tianao ny mametraka ny antson'izy ireo). Aorian'ny nahazoanao ny laharam-piantsoana antso vaovao anao, dia mirosoa amin'ny fanentanana fanadiovana ny fitanisana anao, mampihatra ny laharana vaovao amin'ny lisitry ny fandraharahana eo an-toerana, ny tranokalanao ary ireo sehatra hafa (afa-tsy ireo sehatra dokam-barotra karama) izay miresaka momba ny orinasanao.
Aza ampiasaina amin'ny laharan'ny dokam-barotra isaky ny doka na karazana dokam-barotra an-tserasera ny nomeraon'ny laharam-pahamehanao. Ny fanaovana izany dia hametra ny fahafahanao manara-maso raha ny angona dia miainga amin'ny marketing organika vs. Makà nomeraon'ny fanaraha-maso antso tsy manam-paharoa ho an'ireo fampielezanao karama Tsy mazoto amin'ny index ny motera fikarohana ka tsy tokony hanimba ny fitohizan'ny angon-drakitrao eo an-toerana izany. * Mitandrema amin'ny fampiasana laharana fanarahana antso isam-bolana amin'ny fampielezan-kevitra ivelan'ny seranana, satria azon'izy ireo atao amin'ny Internet izany. Ampiasao ny laharanao lehibe amin'ny marketing ivelan'ny Internet.
Vonona ny handalina lalina kokoa ny fiarovana sy ny fahombiazana amin'ny fanarahana antso? Vakiteny atolotra: Torolàlana amin'ny fampiasana ny fanaraha-maso antso ho an'ny fikarohana eo an-toerana.
2. Fampidirana ireo Geomodifiers amin'ny anaran'ny orinasa eo an-toerana
Iray amin'ireo hadisoana fahita indrindra ataon'ny orinasa marobe eo amin'ny sehatry ny varotra fikarohana eo an-toerana ny fihodinana teny filamatra ao anaty lisitry ny raharaham-barotra misy azy ireo miaraka amin'ny teny geografika (tanàna, faritany, na anarana manodidina). Raha tsy hoe geomodifier dia ao anatin'ny anaranao ara-dalàna na DBA, Torolàlana an'ny Google rarana mazava tsara io fomba fanao io, amin'ny filazany:
Manampy fampahalalana tsy ilaina amin'ny anaranao (oh: "Google Inc. - foiben-toeran'ny Mountain View Corporate" fa tsy "Google") amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo tagline marketing, kaody fivarotana, tarehintsoratra manokana, ora na statut mihidy / misokatra, nomeraon-telefaona, URLn'ny tranonkala, serivisy / fampahalalana momba ny vokatra, toerana/ adiresy na torolàlana, na fampahalalana mifehy (ohatra: "Chase ATM in Duane Reade") dia tsy avela.
Ireo tompona orinasa na mpivarotra dia mety misy teny geo amin'ny sehatry ny anaran'ny orinasa na satria manandrana manavaka ny sampana iray amin'ny iray hafa ho an'ny mpanjifa izy ireo, na satria mahatsapa izy ireo fa hanana toerana tsara kokoa raha toa ka tafiditra ao anatin'ireo lisitra ireo ireo teny ireo. Ho an'ny fandinihana teo aloha, tsara kokoa ny mamela an'i Google hampiseho amin'ny mpanjifa ny sampana akaiky azy indrindra, izay ampiasain'i Google ankehitriny amin'ny ambaratonga avo lenta. Ho an'ny fandinihana farany, misy marina ny zava-misy fa ny fananana anaran'ny tanàna amin'ny anaram-boninahitry ny orinasa dia mety hanatsara ny filaharana, fa tsy mendrika ny handika ny lalàn'i Google raha te hahalala.
Noho izany, raha orinasa vaovao no azonao, azonao atao ny mieritreritra ny hampiasa anaran'ny tanàna ho anisan'ny anaranao ara-dalàna, tafiditra ao amin'ireo takelaka misy anao eny an-dalambe, tranonkala sy zavatra vita pirinty ary fiarahabana an-tariby, fa, amin'ny hafa scenario, fampidirana geomodifiers amin'ny anaran'ny orinasa dia tsy eken'i Google. Ary, satria tianao ny lisitr'ireo orinasa eo an-toerana hafa mba hifanaraka amin'ny angona Google anao, dia tokony hanaraka an'io fitsipika io ianao amin'ny fitanisana cottière hafa rehetra, mametraka ny anaran'ny orinasanao fotsiny tsy misy mpanova isaky ny toerana.
* Mariho fa misy iray maningana amin'ireo voalaza etsy ambony. Facebook dia mitaky ny fampiasana geomodifiers ho an'ny orinasa marobe. Tsy avelan'izy ireo anarana mitovy sy zaraina eo amin'ny lisitry ny Facebook Place. Noho io antony io dia mila manampy mpanova ny lohateny fandraharahana Facebook Place ianao isaky ny toerana. Mampalahelo fa miteraka tsy fitoviana amin'ny angon-drakitra izany fa aza manahy be loatra momba an'io ankanavaka tokana io. Ny mpifaninana rehetra aminao miaraka amin'ny maodelim-barotra amin'ny toerana maro dia ao anaty sambo iray ihany, ka manome tombony mifaninana / fahantrana.
3. Ny tsy fivoarana ny pejy fitobiana toerana
Raha manana sampana 2, 10 na 200 ny orinasanao ary manondro ny lisitry ny orinasa eo an-toerana sy ny mpanjifa ao amin'ny pejy fandraisam-bahinao ianao, dia mametra mafy ny fahafahanao manome traikefa miavaka sy namboarina ho an'ny vondrona mpampiasa samihafa.
Ny pejy fitobiana toerana (aka 'pejy fidinana eo an-toerana', 'pejin'ny fipetrahana an-tanàna') dia miezaka ny mampita ny fampahalalana mifandraika indrindra amin'ny mpanjifa (sy ny botan'ny motera fikarohana) momba ny sampana iray an'ny orinasa iray. Ity no mety ho ny toerana akaiky indrindra ny mpanjifa, na ny toerana anaovany fikarohana alohan'ny na mandritra ny dia.
Ny pejy fidinana toerana dia tokony ampifandraisina mivantana amin'ny / avy amin'ny lisitry ny orinasan'ny sampana tsirairay avy, ary mora azo amin'ny tranokalan'ny orinasa amin'ny alàlan'ny menio avo lenta na widget misy ny mpikaroka. Ireto misy dosie haingana ary tsy tokony hatao:
Alao antoka fa ny atiny amin'ireto pejy ireto dia tsy manam-paharoa. Aza soloina fotsiny ireo anaran-tanàna amin'ireo pejy ireo ary avereno aparitaka manerana azy ireo ny atiny. Manambola amin'ny fanoratana tsara sy mamorona isaky ny pejy.
Aza hadino ny zavatra voalohany amin'ny pejy tsirairay dia ny NAP feno an'ny toerana (anarana, adiresy ary nomeraon-telefaona).
Ataovy famintinana ny lakile marika, entana sy serivisy atolotra isaky ny sampana
Ampidiro ao fijoroana vavolombelona ary rohy mankany amin'ireo mombamomba anao isaky ny sampana
Aza adino ny mampiditra lalana mitondra fiara, ao anatin'izany ny famaritana ireo mpitsangatsangana marimaritra iraisana dia afaka mahita mora eo akaikin'ny orinasa
Aza atao ambanin-javatra ny vintana dity maninona ny orinasao no safidy tsara indrindra eto an-tanàna amin'izay ilain'ny mpampiasa
Aza adino ny manolotra fomba tsara indrindra hifandraisana amin'ny orinasa aorian'ny ora maro (mailaka, hafatra an-telefaona, chat mivantana, lahatsoratra) miaraka amin'ny vinavina ny faharetan'ny faharetan'ny fihainoana
Vonona hisitrika lalina ny kanto amin'ny famoronana pejy fitobiana toerana tsara indrindra ao an-tanàna? Vakiteny atolotra: Mandresy ny tahotrao amin'ny pejy fitobiana eo an-toerana.
4. Tsy firaharahiana ny tsy fitoviana
Manaiky izany ny manam-pahaizana momba ny indostria fa ireo lafin-javatra 3 ireo dia manimba kokoa noho ny hafa amin'ny fahafahan'ny orinasa mankafy ny laharana ambony eo an-toerana:
Misafidy an diso sokajy orinasa rehefa mamorona lisitry ny orinasa eo an-toerana
Fampiasana a hosoka toerana misy orinasa ary ahitan'ny Google an'io
manana tsy fitoviana anarana, adiresy, na nomeraon-telefaona (NAP) manodidina ny tranonkala
Ny lafy ratsy roa voalohany dia mora fehezina: mifidiana sokajy marina fa aza manadino ny angona toerana mihitsy. Ny fahatelo kosa dia ilay afaka miala tanana nefa tsy fantatry ny tompona orinasa akory. Ny angona NAP ratsy dia mety avy amin'ny iray amin'ireto manaraka ireto:
Ny andro voalohan'ny Fikarohana eo an-toerana raha ny motera fikarohana dia nisintona angon-drakitra avy amina loharanom-baovao marobe sy ivelan'ny Internet, izay mety ho lesoka
Famerenana, famindrana, na fanovana nomeraon-telefaona azy
Fampiharana diso ny laharan'ny fanaraha-maso antso
Tsy dia misy firesahana ofisialy momba ny angona ratsy, toy ny amin'ny bilaogy, ny vaovao an-tserasera, na ny tsikera
Ny angona zaraina eo amin'ireo lisitra roa dia miteraka fikorontanana na lisitra natambatra
Data tsy mifanaraka amin'ny tranokalan'ny orinasa mihitsy
Noho ny fomba fivezivezan'ny data momba ny asa eto an-toerana mandritra ny ekosistema fikarohana eo an-toerana, angona ratsy amin'ny sehatra iray dia mety hidina amin'ny hafa. Raha jerena fa ny NAP ratsy dia inoana fa misy fiatraikany ratsy indrindra fahatelo amin'ny laharam-pikarohana eo an-toerana, tena ilaina tokoa ny mahita azy io sy manadio azy. Ity dingana ity dia antsoina hoe «citation audit».
Ny fanamarinana citation amin'ny ankapobeny dia manomboka amin'ny fitadiavana fikarohana an-tanana momba ny karazana NAP, miampy ny fampiasana fitaovana maimaimpoana toa Mozika Listing List, izay ahafahanao manombatombana avy hatrany ny fahasalaman'ny NAPo amin'ireo sehatra lehibe indrindra. Raha vantany vao hita ny NAP ratsy, ny orinasa dia afaka miasa amin'ny tanana manitsy azy, na, raha mitsitsy fotoana, dia mampiasa serivisy aloa. Misy serivisy malaza sasany any Amerika Avaratra Moz Local, whitespark, ary Yext. Ny tanjona faratampon'ny fanaovana audit citation dia ny hahazoana antoka fa ny anaranao, ny adiresy ary ny nomeraon-telefainao dia mifanaraka arak'izay azo atao, amin'ny toerana maro araka izay azo atao, manerana ny tranonkala.
Dingana manaraka manaraka ny SEO
Amin'ny taona ho avy, ny orinasanao eo an-toerana dia hanao karazana fanentanana amin'ny varotra mba haharaka ny fivoaran'ny Internet sy ny toetran'ny mpampiasa, fa izany rehetra izany dia mila aorina amin'ny fototra iorenan'ny fotokevitra ifehezana tena mahay. Ny tsy fitovizan'ny NAP, ny fanarahana ny torolàlana ary ny fampandrosoana ny atiny izay manaraka ny fomba fanao mety sy tsara indrindra dia hitohy ho manan-danja amin'ireo orinasa eo an-toerana rehetra amin'ny ho avy azo tsinjovina, izay mamorona pad fandefasana feo hanamafisana ny fikarohana rehetra momba ny teknolojia fikarohana eo an-toerana. Te hahita ny fisehon'ny orinasao amin'ny Internet?
Te hahita ny fisehon'ny orinasao amin'ny Internet?
Makà tatitra lisitra Moz eto an-toerana maimaim-poana
Tags: adiresyfanaraha-maso antsomiantso laharana fanarahanatoerana facebookgeomodifiersGoogle MapsGoogle+ Localfikarohana eo an-toeranaseo eo an-toeranaMozmoz eo an-toeranaanaranatorimaso kely,nomeraon-telefaonaSEO
Miriam Ellis dia ao amin'ny Moz Local ekipa. Rehefa tsy manoratra ny mailaka isam-bolana Moz Local sy mamaly fanontaniana ao amin'ny forum Q&A izy dia manampy ny mpanjifany hahafehy ny paikadin'ny SEO eo an-toerana amin'ny orinasany manokana. Famolavolana tranonkala Solas.
Google Analytics manangana Data Studio (Beta)